Foolleen maal? – Oromedia
Home » Gadaa » Foolleen maal?
Akka Gadaa Oromoo Maccaa Tuulamaa fi Arsiitti Foolleen dargaggoota gannaa 16-24 keessa jiran. Isaan kunneen akka Gadaa Oromoo Booranaatti warra Gaammee Guguddaa jedhaman.
Sadarkaa Gadaa Foollee keessati dargagoon sirritti biyyas walis baruun akka sirni, aadaa, naamusti fi tasgabbiin ummataa fi naannoo eegamu taasisu. Warri Foollee kun Boorana keessatti Jaldhaaba jedhamu. Bakak hundatti, gaheen isanii walfakkaata. Akka raayyaa waraanatti Gadaa jalatti kan ajajamanii dha. Gadaaf ni ergamu, loon bade ni barbaadu, bishaan ni obaasu. Warra Gadaa akka abbaa isaanitti gargaaru dha. Kanaaf Gadaan gaafa gadooma isaa damma qopheessee laataaf.
Foolleen ijoollee Abbaa Yuubaa ti. Akka sirna Gadaatti namni tokko kan fuudhee mana godhatu, yeroo umurii Raabummaatti seenu; kana jechuun yeroo umuriin isaa 32 ta’u niitii fududha jechuudha. Mucaan yeroo abbaan Raabaa Doorii keessa jiru kaaeessatti dhalatu, Gaammee ta’a. Yeroo abbaan isaanii Gadaa fudhatu immoo ijoolleen Dabballee ta’u. Yeroo abbaan Yuubatti seenu, ijoolleen Foollummaatti seenu. Kanaaf, Foolleen warra Gadaa keessa jiraniif raayyaa naannoo, kan nagaa fi sirna kabachiisan ta’u.
Previous: Hiika alaabaafi asxaa Oromoo sirna Gadaa
Next: HAMBAA BARDHEENGADDAA